OMC Umfutho Gasoline Okokhelekayo Amathangi | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
OMC Gasoline Umfutho Okokhelekayo Amathangi
Chofoza Lapha ukuze uthenge eBay I-Evinrude/ Johnson Dual Fuel Lines kanye namathangi
Isixwayiso Esitholakala Kokwenzeka Mayelana Umfutho Gasoline Okokhelekayo Amathangi Isetshenziswa On Okudala OMC Motors
Lawa ma-motors asebenzisa amathangi kaphethiloli acindezelwe, aziwa nge-Cruis-a-Day Tanks. Esikhundleni sokumunca uphethiloli ethangini, ipayipi lomugqa omabili lifaka umoya ungene ethangini, liwucindezele liye ku-4-7 PSI ephoqa uphethiloli ukubuyela emotweni. Ngokuyisisekelo, la mathangi acindezelwe ayingozi yomlilo noma yokuqhuma eyingozi kakhulu. I-OMC ekugcineni yeka ukusebenzisa la mathangi ngemuva kuka-1959 ..
Ungabona uma unenye yalamathangi ngoba ipayipi lizoba nolayini ababili, owodwa wokumpompa umoya ethangini likaphethiloli, kanti omunye ukuletha uphethiloli emotweni. Lolu hlobo lwethangi kwakuyithangi likaphethiloli lokuqala langaphandle i-OMC eyaphuma nalo futhi kwaba ubuchwepheshe obusha osukwini lwayo. Lapho izinkinga sezitholakele, abakhiqizi bezimoto zemikhumbi bashintshela ohlelweni olulodwa lokudonsa uphethiloli oluphephe kakhulu.
Ingcindezi Tank Isixhumi
Old Style Pressure Okokhelekayo Tank
5 Gallon Pressure Okokhelekayo Tank
Izinkinga Umfutho Okokhelekayo Tanks:
Gasoline kanye negesi umusi ngaphansi kwengcindezi into esingaphansi ibhomu!
Kunzima ukuthola la mathangi ukuthi avale kahle, noma ngabe amasha. Uma amathangi evuza, uphethiloli kanye nowoyela kuzobalekela esikebheni sakho nasemoyeni.
amathangi eyayivuza futhi ulahlekelwe ingcindezi ezidingekayo ukuletha fuel up hose olude lokubuyela motor.
Uma unesilinda esigadliwe, la ma-motors angathimula (umlilo ngaphakathi kwebhulokhi) bese uphoqa ingcindezi yehle ulayini kaphethiloli nethangi. Lokhu kwaziwa ukuthi kudale ukuthi omakepisi bashaye ukubonga badubule amamitha angama-20 emoyeni! Lokhu kuthimula nakho kungasha ithangi lakho likaphethiloli. Lokhu kwaziwa futhi ukuthi kudale ukuthi izintambo zikaphethiloli zidabuke.
Uma phezu kwamanzi kanye tank yakho ehluleka ukubamba ingcindezi, indlela kuphela ukusebenzisa imoto yakho ukubamba ithangi ngaphezu ezingeni carburetor futhi ake fuel adonsela phansi okuphakelayo enjinini.
La mathangi kwakungelula ukuwasebenzisa. Kufanele ucindezele ithangi ngepompo lesandla ngaphambi kokuqala imoto yakho. Kufanele futhi ucindezele ithangi ngaphambi kokukhipha ikepisi.
Uma unenye yalamathangi okudala okucindezela, maningi amathuba okuthi izodinga ukugcinwa ukuze isebenze kahle. Kukhona amakhithi atholakalayo ukulungisa ama-gaskets nezimpawu ezikula mathangi ezingasathengwa nanamuhla. Udinga ukuthatha isinqumo sokulungisa ithangi lakho elivele likhona noma uguqulele ohlotsheni lwempompo kaphethiloli nolayini osetshenziswa yi-OMC namuhla.
Le nqubo elandelayo ulandisa indlela ungakwazi imoto yakho ukuze esiku uphethiloli futha, umugqa, kanye ithangi okuzoba ephephile futhi eziqinile.
Ukuguqula usuka ababili Line Pressure Tank yesistimu Single Line Impompi kaphethiloli ukuncela Tank System
Inqubo yokwenza lokhu kuguqulwa ilula, ikakhulukazi uma usuvele ukhishwe i-carburetor yakho ukuze uzilungiselele. Izinto ozozidinga zifaka okulandelayo:
Mayelana 6 izinyawo cleaner umugqa hose, etholakalayo nganoma yisiphi isitolo izingxenye auto.
Umshini Line Cap
3 noma 4-Zip Ties
Single Line Okokhelekayo Isixhumi
Single Line negesi Tank futhi Hose
IMikumi yinkampani yaseJapan ebineminyaka ikhona yenza amakhabethe namapampu kaphethiloli. Uzobona amaphampu abo amaningi kaphethiloli asetshenziswa kuma-go-carts, izindiza ezine-light-light, nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi ezibandakanya izinjini ezincane. Le mpompo kaphethiloli itholakala cishe kunoma yisiphi isitolo sezinqola. Ngithenge lena ku-inthanethi cishe ngama- $ 22.00. Amapompo amaningi kaphethiloli wezinjini ezincane ze-Evinrude neJohnson akhuphuka ngqo kwi-crankcase. Endabeni yale moto engu-5.5 HP, ayikho indawo yokufaka iphampu kaphethiloli. Ama-motors amakhulu afana ne-7.5, 10, noma i-18 HP con anepampu ye-stock OMC engeziwe.
Mikumi Pulse Kuvulwa Impompi kaphethiloli
Le mpompo kaphethiloli isebenza nge-vacuum pulse etholakala emotweni. Leli vacuum lenziwa yimoto bese lilethwa kupompo ngokusebenzisa ipayipi elixhunywe kusixhumi esiphakathi empompini. Ezinye izixhumi ezimbili zemigqa eya ethangini legesi noma isixhumi sikaphethiloli (umcibisholo okhomba ngaphakathi) nasemgqeni oya ku-carburetor (umcibisholo okhomba).
Susa i-Carburetor CHOFOZA LAPHA. ukubona imiyalelo kokukhipha carburetor.
Uma ususa ikhava eninginingi yokungenisa, etholakala ngemuva kwe-carburetor, uzobona izimbobo ezimbili ezinezimpaphe zenjoloba phezu kwazo. Ukushaywa kungama-valve wokuhlola okuphuma kuwo ukuya ngaphandle kusuka ku-crankcase. Lokhu kudala ingcindezi yomoya enhle ukwehla ngomunye wemigqa kaphethiloli ombaxambili ukucindezela ithangi. Susa izikulufo ezimbili ezibambe intwasahlobo bese uhlola ama-valve. Enye yale migodi iya egumbini ngalinye le-crankcase emotweni yethu yomjikelezo emibili.
Ukuze uthole i-pulse vacuum, xhuma enye yezimbobo ngethiphu lepulagi yomugqa we-vacuum. Nciphisa ubude bepulagi yomugqa we-vacuum ukuze ikhava eninginingi yokungenisa izobamba ipulaki endaweni yayo ukuze ingawi endaweni. Faka esikhundleni sekhava eninginingi yokungenisa.
Shintsha isixhumi esidala somugqa kaphethiloli ngesixhumi esisha sophethiloli. Ngikwazile ukuthola isixhumi sikaphethiloli esisodwa egcekeni lendawo yami yokuhlenga isikebhe cishe ama- $ 6.00 kepha ayatholakala kubathengisi bezingxenye ze-OMC. Izithombe ezingezansi ungabona izixhumi ezindala nezintsha zikaphethiloli. Isixhumi esisha (ngakwesobunxele) sinama-prong amabili kuphela. Namathisela umugqa wezinyawo ezimbili kusixhumi kukhava eninginingi yokungenisa.
Susa olayini ababili abadala abadabula isisekelo sezingalo se-tiller baye kusixhumi somugqa kaphethiloli bese ushintsha ngomugqa owodwa ozosuka kusixhumi sophethiloli uye kwimpompo entsha kaphethiloli. Vumela cishe amamitha amabili womugqa ukuhamba uzungeze iphampu kaphethiloli.
Faka esikhundleni i-Carburetor CHOFOZA LAPHA. ukubona imiyalo yokufaka i-carburetor. Namathisela umugqa we-vacuum we-2 wezinyawo ku-carburetor ozozungeziswa kupompo kaphethiloli.
Shayela umugqa wakho we-vacuum pulse, umugqa we-carburetor, kanye nolayini wokuxhuma uphethiloli ozungeze iphampu likaphethiloli engilibeka ngemuva kwe-lever shift lever phezulu eduze kwe-crankcase. Nquma noma yibuphi ubude obedlulele yakha imigqa bese uxhuma kupompo kaphethiloli. Lapho uhambisa le migqa, yigcine isuka kunoma yiziphi izingxenye ezihambayo, noma izixhumanisi. I-cowling kufanele ilingane ngaphezu kwepompo yakho entsha kaphethiloli. Sebenzisa izibopho ze-zip ukuvikela imigqa ukuze ihlale endaweni.
motor yakho manje iguqulwe futhi usukulungele ukusebenzisa entsha tank igesi nophethiloli umugqa wakho.